NgeSonto, ngoJulayi 24, i-2005 NgoMgqibelo, Okthoba 18, 2014 Douglas Karr
Ngasekuqaleni konyaka, ngisebenze neThimba leNFL likazwelonke ukuhlola amathuluzi abo wokumaketha e-database nase-imeyili. Kube wukuhlaziywa okuphelele kwamathuluzi amaningi abanawo. Izindawo engigxile kuzo yilezi:
Amandla okuhlanganisa izixazululo zangaphandle
Amandla okuzenzekelayo izinqubo
Ukuphendula kwenkampani ngokuphathwa nokuxhaswa kwe-akhawunti
Okubili kokuqala kwalokhu kwakuyinzuzo yesikhathi esizayo. Bengifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi inhlangano isebenza ngezixazululo ezamukela ukuhlanganiswa nokwenza i-automation, noma ngabe izici zabo zamanje kungenzeka bezingeyona kuze kufike emncintiswaneni. Kuyimpikiswano enzima yokwenza abantu bayiqonde, kepha izinkampani zinamakhono ayisisekelo. Lapho beqala ukusebenza ngaphandle kwalawo makghono okuyisisekelo ukukhiqiza imali eyengeziwe, baqala ukwenza buthakathaka umkhiqizo wabo oyinhloko futhi kungenzeka babe nemikhiqizo eminingi ekhethiwe ecebile, kepha engalungile ekwakhiweni, ukwesekwa kanye nokwenza izinto ezintsha.
Isimo sanamuhla sobuchwepheshe siyashintsha. Ngingamane ngikhombe izinkampani ukuthi zivule ubuchwepheshe obungazenzekela futhi buhlanganiswe kahle, kunemikhiqizo ecebile.
Ekugcineni, inkampani yathatha izeluleko zami. Esikhundleni sokusebenza kusisombululo esisodwa, baqale ukusebenza ngezixazululo ezi-3 ezihlukile, futhi esinye esingatholakali njengamanje, siseduze. Amathikithi abo enziwa ohlelweni lwabo lwethikithi, i-Customer Relationship Management yabo yenziwa ohlelweni lwabo lweCRM (Salesforce), futhi i-Email Marketing Solution yabo yenziwa kwi-Email Marketing Solution yabo (Exacttarget). Isixazululo sesi-4 yisisombululo sasekhaya esiku-inthanethi, into esingakaze siyibone kuze kube manje.
Kungakapheli isonto lokuhlanganiswa kokuqala, sine-imeyili emnyango wokuthuthukisa ukuxhumana nabaphethe amaThikithi abo eSizini. Manje sisebenzela ukuhlanganisa imininingo egciniwe yamathikithi abo kwiCRM yabo… inselelo ukuthi uhlelo lwamathikithi aluhambisani kahle. Lokho kuyishwa futhi kubhekwa njengesithiyo sokwenza ngcono ukuqhubeka kwenqubo.
Inkampani yamathikithi ingahle ifune ukucabanga kabusha ngamasu ayo futhi inamathele kubuchule bayo obuyisisekelo, ngaphandle kwalokho omunye umuntu uzofika nesisombululo esizodlala kahle futhi simiselele.
Tags: Apiisikhombi sokuhlela ukusebenzaukukhulaisoftware ehlanganisiweUkuhlanganiswavula isoftware